Ukuhlalutya imijelo yoLuntu ngeDathaSift | Martech Zone
Ukuhlalutya imijelo yoLuntu ngeDathaSift
NgoLwesithathu, Novemba 16, 2011 NgoLwesibini, Septemba 25, 2012 Douglas Karr
IdathaSift liqonga lokucoca idatha yemithombo yeendaba elinexesha lokwenyani kwaye yenye yeenkampani ezimbini kuphela emhlabeni ezinelayisensi yokwenza Twitter idatha efumanekayo yorhwebo ngeenjongo ezingaboniswanga, evumela abasebenzisi ukuba bakhangele izithuba besebenzisa imethadatha equlethwe kwii-tweets. Kwaye iyakwenza ujongano oluhle ngokumangalisayo kunye ne ikhonsoli yonjiniyela kwaye yomelele API (iilayibrari zabaxhasi ziyafumaneka) ngolwimi lwazo lokubuza.
intsebenzo.Umxholo NAYiphi na "i-HTC, iNokia, iRIM, iApple, iSamsung, iSony"
IdathaSift yasekwa ngu UNick Halstead ukunceda imibutho iphucule ukuqonda kwabo kunye nokusebenzisa iMedia Media. IdathaSift ijolise ekuveliseni imeko yetekhnoloji yokuhluza idatha kunye nokuqhuba izinto ezintsha kwiDatha enkulu. IdathaSift iqale ubomi bayo njengehlumelo ukusuka KwiMeme, inkonzo ethandwayo yeendaba ezondla nge-Twitter. Emva kokunikela ubungqina kwimicimbi yemithombo yeendaba yeNtlalontle ngokukhawuleza, uNick Halstead waqalisa ukwenza iqonga lokunceda iinkampani zilawule iMithombo yezeNtlalontle kwaye zisebenzise ulwazi oluza kufunyanwa ngaphakathi kwedatha.
IdathaSift ayinciphisi ukukhangela ngokusekwe kumagama aphambili kwaye ivumela iinkampani zabo nabuphi na ubungakanani ukuba zichaze iifilitha ezintsonkothileyo, kubandakanya indawo, isini, uvakalelo, ulwimi, kunye nefuthe ngokusekwe kumanqaku eKlout, ukubonelela ngengqondo ekhawulezileyo kunye nohlalutyo. Itekhnoloji yeDathaSift inokufaka inkqubo yokuhluza idatha nakweyiphi na into emelwe njengekhonkco kwisithuba ngokwaso, ukubonelela iinkampani ngomfanekiso ochanekileyo, opheleleyo.
Imithombo yeendaba kwezentlalo iyandisile imeko ekhawulezileyo yeshishini namhlanje. Iinkampani azinabunewunewu bokucoca amakhulu ezigidi zemijelo yedatha yonke imihla, kuphela ukuba uqikelele inyathelo elifanelekileyo. Into abayifunayo kukufikelela ngokuqinisekileyo kubukrelekrele bexesha-lokwenyani elinempembelelo kwishishini labo -ukubavumela ukuba babone ngokulula kwaye bakhawuleze baphendule kwiziganeko eziphambili zokuziphatha, isimilo sentlalo, ukhetho lwabathengi- kwaye ekugqibeleni, ukuthintela naziphi na iingxaki ezizayo. Simangalisiwe yimfuno yeqonga lethu eMelika kwaye sivula iofisi yokujongana nale mfuno. Umseki, uNick Halstead.
Izicelo ezinokubakho zeDathaSift ziphantse zangumda, kubandakanya ukuthengisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yabathengi, phakathi kwabanye abaninzi. IdathaSift inika imodeli yamaxabiso esekwe kwilifu nge-pay-as-you-go okanye ukhetho lobhaliso, olulungele iinkampani okanye abantu nabuphi na ubukhulu.
tags: ukukhutshwa kwedathauhlalutyo kumajelo asekuhlaleniumsinga wentlalo